Hei Mupata Vakomana, Yeuka ChaCha? | Martech Zone
Chishanu, December 4, 2009 Chishanu, December 4, 2009 Douglas Karr
Kana iwe wanga uchiverenga bhurogu yangu kwenguva refu, iwe ungadai uchiziva izvozvo maonero angu aChaCha anga aine kumusoro uye kuderera. ChaCha ikozvino mutengi (pane kuziviswa kwangu) saka ndanga ndichitora zvakadzama kutarisa ...
Usatore izwi rangu nezvazvo!
Iyo yese tech nharaunda, kusanganisira vepamoyo paTechCrunch (vakomana vanoda kuvenga ChaCha) uye Mashable .
Zvimwe veVall Boys vanofanirwa kuchinjisa maziso avo erudo kubva Twitter kweminiti chete kana maviri kutarisa kuMidwest.
Hezvino izvo zvawakarasikirwa… ChaCha yabuda kuita nhanho uye yapinda chinyararire Mawebhusayithi makuru eA Alexa mazana mashanu muUnited States. Kwikwidzana kunoratidza 575% kukura. Uye Quantcast? Izvi sei zvekukura?
Saka zvakadii nazvo Silicon vakomana? Ngatinzwei dzimwe nhau dze Silicorn Mupata… ChaCha ndiye mwana akadzoka wa2009. Vanhu vazhinji kupfuura nakare kose vari kuwana mhinduro dzavanoda nekutarisa ChaCha.com kana kutumira mameseji mibvunzo ku242242.
Iyo kambani yapfuura nedzimwe shanduko huru dzekunonoka. Shamwari yakanaka, Blake Methany, pamberi peVP yeTekinoroji (inoitisa isingabvumirwe bhizinesi kublogi kwezvivakwa) pa Kuumbiridza Blogware, iye zvino ari mubatsiri wezvikwata zveTechnology neOperation paChaCha.
Blake akataura kuti pakave nekumwe kushanduka kwevashandi shanduko uye nekukurumidza uye nekukurumidza kuvandudza kune einjiniya maitiro mukati. Iko kukanganisa kuri kushanda uye kwakatyora kusununguka kwemazhinji kutorwa, uyezve, mamwe mamodheru emari ari kuita ChaCha kutaridzika kunakidza.
Ndiri kutarisira kushanda nechikwata kuChaCha kuburikidza na2010 kubatsira kambani kuitora kusvika kumatanho asingaonekwe nekambani iri munzvimbo.
Mahalo nekucherechedza. 😉
Tags: 2012kuita maripython bugsrairiruby bugsruby panjanjistephen coleymamiriro ekunze anotarisa
Zvita 6, 2009 na4: 08 PM
Ivo vari pane yangu dombo nyeredzi rondedzero. Maminetsi gumi pamberi pehurukuro, ndinofunga kuisa muenzaniso chaiwo, asi ndinogona kungorangarira zita rekutanga mukwikwidzi weOlympic Bronze muna 10 Chris….
Cha Cha kununura - .. Kunyangwe zvakatora chinguva, asi vakazvibata! Chris Campbell! uye ini ndaitaridza kunge shasha!
Ivo vari pamupumburu nekuti vane chigadzirwa chinoshanda. Vashandisi vanozviziva, pamwe pakupedzisira silicon mupata uchadawo